Shiinaha oo 6 cisho ka eegay hargabka Karoona magaalo 12 milyan ku noolyihiin - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Shiinaha oo 6 cisho ka eegay hargabka Karoona magaalo 12 milyan ku noolyihiin
Shiinaha oo hogaaminaya ka hortaga hargabka Karoona iyo weliba sida loo xadido ayaa sheegay inay ka fiiriyeen gobolka Wuuhaan gebi ahaantiisba muddo lix cisho ah. Nooca hargabka la fiiriyay ayaa ka yimi Hindiya.
Wuuhaan oo loo malaynayo halka uu ka soo unkamay hargabka Karoona ayaa looga shikiyay inuu soo galay noocan dambe ee ka yimi Hindiya. Shiinaha ayaa dhinaca kale soo saaray qalab daqiiqado ku ogaanaya inaad qabto iyo in kale.
In ka badan 28000 oo shaqaale ah oo u tababaran sida hargabka loo tijaabiyo ayaa hawshan gutay. Shiinaha ayaa ah wadamada ugu horeeya dhinaca ka hortaga waana iyaga kan ay ka minguuriyaan reer galbeedka.